Sidee ayey u shaqaysaa
Su'aasha Inkulation Acoustic Insulation
Dib u isticmaal Qalabka
Qalabka rakibay ee TSG
Aayadaha Midabbada ee Nidaamyada Silent Roof
Booqo Boggeena Si aad Cusboonaysiinta uga hesho Wixii Soo Socda
Dramatically waxay yareysaa buuqa roobka ee qaab kasta oo bir ah ama qaab dhismeedka dusha sare ee Hard dusha sare
Qaylada roobku dhib ma kuu yihiin adiga?
Waxaan leenahay Xalka, Akhri
Burburkii O2 Arena uu geystay intii lagu jiray Storm Eunice. Qaybaha saqafka dharka ee goobta, oo hore loo yiqiin Millennium Dome, ayaa la gooyay xoogga dabaylaha duufaanta 18kii Febraayo 2022.
Hal su'aal oo ah in Silent Roof Ltd lagu weydiiyo nidaamsalku waa
"Intee in le'eg bay ammaan u tahay rakibaadda Saqafka Aamusan ee xaaladaha cimilada duufaantu?" Sawirka sare waa kan rakibaadda Silent Saqafka ee dhowaan la qaaday wax yar ka dib duufaanta Eunice ayaa soo martay UK. Rakibaadda ayaa ku taal dabaqa 10-aad ee dhismo bannaanka loo soo dhigay. Waan ku faraxsanahay inaan soo sheegno, sida aad arki karto, midkan iyo mid kasta oo ka mid ah qalabyadayada la dhamaystiray midna wax khasaare ah kama soo gaarin duufaanta Eunice ama mid kasta oo ka mid ah duufaanadii dhawaa ee 2021-22.
Ka eeg boggayaga Facebook halkan
Fiidiyowgaan wuxuu muujinayaa rakibayaashayada TV-ga iyo Kooxda Studio-ga ee aan magacownay, iyagoo ku dabaqaya summada taranta dusha sare ee rakibidda Silent Saqafka London Film Studios.
Sawirro dhowr ah oo muujinaya rakibida Saqafka Aamusan ee lagu qabanayo dabaqa 10-aad ee dhismo. In yar oo ka duwan xaaladda caadiga ah.
Annaga oo ah Silent Roof ayaa ah kuwa kaliya ee alaab-qeybiyeyaasha ah ee Wide World Roof ee alaabteenna Silent Roof taas oo si aad ah u yareyneysa sawaxanka roobka ee ka soo baxa meelaha saqafka ah Waxaan ku saleysanahay xeebta koonfureed ee Boqortooyada Midowday, xafiiskayaga diiwaangashan wuxuu ku yaal Torquay, Devon, UK. Waxaan ka shaqeyneynaa rakibidda dhammaan Boqortooyada Midowday iyadoo la raacayo xaddidaadyo gaar ah waxaanan u siineynaa qalabkeenna gaarka ah rakibayaasha adduunka oo dhan. Ma xiiseyneysaa inaad nagala hadasho mashruucaaga? Ma xiiseyneysaa dhoofinta? U fiirso hoosta boggan, ama na soo wac.
Telefoon: 01803 203445 Moobayl: 077865 76659
Sida loo joojiyo buuqa roobka saqafka saqafka saqafka ah.
Anaga oo ah Silent Roof waxaan u helnay xalka dhibaatada dhawaqa roobka ee ka yimaada sagxadda saqafka adag ee loo maro guriga ama meesha shaqada ka hooseysa. Waxaan u isticmaalnaa agabkeena tiknoolajiyada yareynta Sanadka Roobka sida sagxadyada sheybaarka Profileka iyo wixii la mid ah.
Mar haddii lagu rakibay meel ka hooseysa saqafka dusha sare ee la daaweeyay isla markiiba waxay ka faa'iideysaneysaa hoos u dhac weyn oo ku yimid wasakhowga roobka. Sawirada ku yaal boggan ayaa ah tusaale muujinaya sida SRM loogu dabaqayo Wejiga weyn ee Dabaal-dhiska Wejiga ee Warshadda Honey Monster Factory ee Southall, London, bisha Sebtembar 2018, oo dhan mitir laba jibaaran oo 5400 ah.
Saqafka Birta Difaaca
Guddiyada Dabaqeedka Birta-Profile -Camramically yare dhimista Buuqa Roobka
Xaaladaha buuqa roobka ee ka sameysan birta ama shey ka kooban saqafka saamaynaya goobta shaqada ee hoose waxaad na soo wacdaa Silent Roof,
waxaan u haynaa xalka dhibaatadaada. Iyada oo lala kaashanayo shirkadda soo saarta adduunka ee seddexda shey ee matoor xayirista matoor Nidaamka Silent Roof System, oo lagu rakibay dusha saqafkaaga haatan Dramatically Waxay yareysaa buuqa roobka inta aysan dhicin. Qaylada roobka ee noocyadan dhismeyaasha saqafka ah waa mid buuq badan deegaanno badan oo kala duwan; unugyada warshadaha warshadaha, iskuulada, waaxda filinka, xafiisyada ganacsiga iyo wixii la mid ah. Sawirrada boggan waa sawir muujinaya sida SRM loogu dabaqayo Wejiga Wejiga Profile weyn ee ku yaal Dabaqadda Warshadda ee Monster ee Koonfurta Southall, London, bisha Sebtember 2018 , dhamaan 5400 mitir murabac ah
Rakibaadda Silent Roof ayaa si dhakhso leh loo dhammeystirayaa dhammaan howlaha rakibaadda waxay ka dhacdaa bannaanka dhismaha si aysan u faragalin howlaha ku hoos jira saqafka sare.
Xayeysiinta Rooftop Midabeysan
HAA, Silent Roof Roof Rooftop Rooftop waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan. Ku hay sumadda shirkadda dusheeda meel kasta oo dusha sare ah. Ma rinjiyeyn, meesha ka qaad oo dib u degin waqti kasta. UV xasilin.
Sannadka 2019, waxaa na soo booqday astaan ​​caalami ah oo loo maro shirkaddayada rakibaadda ee su'aasha soo saartay, 'Maxay yihiin midabyo kale oo la heli karaa?'
Laakiin baaritaankan looma jeedin xakamaynta buuqa roobka laakiin waa ujeedo xayeysiis ah. Lakabka aasaasiga ah ee hal midab ayaa lagu daboolay midab isbarbardhig ku yaal sumadda shirkadaha.
Mashruucan wuxuu ahaa dhisme saqafkiisu yahay 10,000 mitir oo laba jibbaaran oo ay iska indho tireen dhismayaal dhaadheer oo dhaadheer, oo ah goobta ugu wanaagsan ee xayeysiinta.
Kadib bilo gorgortan iyo dadaal ah oo ka socda waaxda R&D ee waxsoosaarkayaga Jarmalka, nooc cusub oo aan ku tilmaameyno,
Midab Silent Roof Mathie (CSRM), ayaa dhashay.
Hada isticmaal saqafkaaga dusha sare si aad u xayeysiiso Una xakameyso buuqa roobka dhibsanaya isla waqtigaas kala duwanaanta gaarka ah ee Silent Roof.
Su'aal: KELIYA ma codsankartaa kharashka loogu talagalay kan kale?
Habka rakibaadda wuxuu ka bilaabmayaa lakabka aasaasiga ah ee midabka la xushay, astaanta shirkadda ayaa laga jaray lakab khafiif ah oo gaar ah oo CSRM ah laguna hubsaday lakabka salka. Shirkadeena rakibida ayaa bixin kara adeegan rakibida aduunka oo dhan. Ma leedahay xaalad ka faa'iidi karta horumarkan cusub? Dusha sare, xayeysiinta Nala soo xiriir US hadda wixii macluumaad dheeraad ah.
Sidee ayey u shaqaysaa ... Maqalku waa Aamin
Sideen u joojin karaa buuqa roobku waa su’aasha caadiga ah Ma joojin kartid roobka, laakiin Silent Roof ayaa si weyn hoos ugu dhigi doona sawaxanka roobka si uu u dhawaaqo.
Muuqaalka gaaban ee fiidiyowga bidix wuxuu si muuqata u muujinayaa saameynta biyo ku daadinta dusha sare ee birta.
Tani waxay ka dhigaysaa qaylada roobka iyadoo aan lahayn faa iidada daboolida shey Silent Roof dusha adag. XUSUUSNOW, kor u qaad mugga qalabkaaga ka hor intaadan gujin batoonka ciyaarta. Waa codka dhawaaqa oo xiiseeya iyo sidoo kale fiidiyowga.
Warshadaha Filimka - Booqo Boggeena
Miyaad ku lug leedahay Warshadaha Filimka?
Dhawaaqa Roobka ma dhibaato buu kuu yahay? Waxaan xalka u haynaa sida loo joojiyo buuqa roobka.
Daanyeer Rooti '
Guga 2018, waxaan helnay baaritaan ku saabsan: -
"Hagaag ... Tani waxay noqon kartaa mid aan caadi ahayn. Waxaan haystay bakhaar weyn oo aan doonayno inaan ka dhawaajino cimilada roobka waxbana kama abuuri karno gudaha gudaheeda sidaa darteed hababka caymiska caadiga ahi ma shaqeeyaan. Qalabkaaga Silent-ka ah Qalabka Silent-ka ma lagu geyn karaa dibadda dusha saqafka birta fadlan? ”
Baadhitaankan ayaa lagu sameeyay rakibida Silent Roof ee ugu horreeyay ee la xidhiidha duubista codka ee Wershadaha Filimka. Waxay dhacday in 'bakhaarka weyn' AKA The Monster ayaa laga helay guri loogu talagalay duubista. Tani waa taxane ay sii deyn doonto Sky Atlantic dabayaaqada sanadka 2019. Silent Roof wuxuu xal u keenay dhibaatada buuqa roobka ee ka imanaya dhismooyinka saqafka dusha sare ee adag. Qaylada roobku waxay si xun u saamayn doontaa howlaha duubista ee shaqaalaha filim duubista ee qeybta hoose ee saqafka bakhaarka. Si guul leh ayaa loo rakibey taas oo su'aalo kale la raacay mar labaad lana xiriirta Warshadaha Filimada. Horraantii 2019, soosaarka cusub ee Sam Mendes '1917' ee 'Storyworks' wuxuu ku hawlan yahay 'Silent Roof Ltd' inay bixiso, Teknolojiyadda Yaraynta Roobka Roobka si loogu duubo goobo ku yaal aagga Salisbury ee Boqortooyada Midowday.
Silent Roof ee Mareykanka
Waxsoosaarka Moffett ee Mareykanka waxayna u isticmaaleen badeecadeenna istuudiyaha filimkooda ee Houston, Texas. Waxaan la socon doonnaa qibradeynta Moffett Productions iyadoo xiiseyneysa.
Ma leedahay xaalad la mid ah? Nala Soo Xiriir - Xal ayaan haynaa - Majirto qulqulka roobka oo dheraad ah.
Takhasusleyaasha TV-ga 'TV' STUDIO GROUP Ltd ee qaabdhismeedyada ku-meel-gaarka ah, istuudiyaha ku habboon, daweynta acoustic iyo soosaarka munaasabadda adduunka oo dhan. TV iyo Filim Studio Group waa khubaro ku xira rakibidda codka, codadka austicic, istuudiyeyaasha istuudiyaha, dhisidda dhismayaasha joogtada ah iyo qaababka ku meel gaarka ah sida; istuudiyaha pop-up, aqoon isweydaarsiyo, qolalka cuntada ee bulshada ka fog iyo dhismayaasha kale ee la midka ah. Khibradooda iyo sida ay uga go'an tahay xirfadooda Shirkadda TV Studio Group Ltd habka ugu haboon ee loo rakibo qalabka Silent Roof waxayna si guul leh u adeegsadeen SRM dhowr bakhaarro, bakhaarro, TV-yada iyo Filimada saqafyada filimada waana kuwa lagu taliyay inay rakibaan SRM.
Rakibayaashii hore ee Silent Roof waxyaabaha ay ka mid yihiin wax soo saar badan oo filim iyo telefishan ah; '1917' Filimka 'Sam Mendes', Batman-ka 'Leavesden Studios', HS2 fiidiyowyo nabdoon iyo waxyaabo kaloo badan, riix halkan si aad u daawato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan rakibaadda saqafka sare ee dhawaanta ee xarunta tababarka HS2 ee Brackley iyo Istuudiyaha Filimada London.
Silent Roof - Rakibaadda Farsamaysan
Muddo dhoweyd waxaan qaadnay qalab rakib ah
habraaca halkaasoo ballaadhka ballaadhan ama ka shaqaynta dhererkiisu yahay
arrin. Sawirka dhinaca midig wuxuu ahaa dabool ku meel gaar ah oo bakhaar ah
loo adeegsaday soosaarista filimka 'Sam Mendes WW1 epic' 1917 '.
Shey u gaar ah oo ereyada sahlan ku jajabisa daadinta roobka ee sagxadda sare ee siman, biyaha roobka ayaa markaa kadib ku daadiya sagxadda, ka dibna u gudbaya dusha sare ee saqafka sare isla markaana u gudbaya nidaamka biyaha daadinta.
Qalabka Silent Roof-ka ah waa mid deggen UV. Sababo la xiriira guryaha dabacsan ee dabacsan ayaa loo isticmaali karaa dusha sare oo dhan hadday fidsan tahay ama fidsan tahay. Waxaan soo saarnay habab kala duwan oo qalabka lagu xafido aagag kala duwan.
Qaylada roobka waxaa naloogu wareejiyaa qaab mowjado dhawaaq ah. Xilliga dayrta roobka waxaa la soo saaraa mowjado kala duwan oo la xiriira saameynta dhibcaha roobka ee saqafka sare dushiisa. Qaab dhismeedka saqafka ee hadda jira wuxuu ahaan doonaa qalab shey-baarayaal ah xoogaa xoogaa ah laakiin malaha xakamaynta buuqa roobku ma ahayn tixgelin asaasi ah markii saqafka su'aasha la dhisayey. Markii aad la kulanto isku day ah inaad saqaf ka adkaysid sawaxanka roobka, tixgelinta koowaad waxay u badan tahay inay ku darsato qalab acoustic ah si loola dagaallamo inta jeer ee codka (dhawaqa roobka), ee ka imanaya qaab dhismeedka saqafka. Dhisme kastaa wuu ka gariiri doonaa mowjadaha qaarkood, darfaha saqafka ha ahaadaan kuwo bir ah ama isku dhafan waxay u dhaqmi doonaan sida maqaarka durbaanka oo markii la saameeyo ay soo saari doonto cod. Sow caqli gal maaha in la soo bandhigo qalabka daaweynta acoustic ee loogu talagalay in lagula tacaalo dhibaatadan qaylada madaxa.
Habka caadiga ah wuxuu noqonayaa in lagu daro cufka saqafka. Dhamaanteen waxaan si dareen leh u wada ogsoon nahay in saqaf ama darbi ka sii dhumuc weyn uu hor istaagi doono faafinta qeylada (hirarka dhawaqa). Marka ka dhig saqafka qaro weyn si loo yareeyo heerka sanqadha ee ay keento roobabka dayrta, miyaanay taasi ahayn jawaabta muuqata? Sharciga ugu caansan ee dhawaaqa ka hortagga waa Mass Mass. Tani waxay sheegaysaa adiga oo laba jibaaraya culeyska xayiraadda acoustic waxaad heli doontaa ugu yaraan 6dB horumar xagga maqnaanshaha codka. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad labanlaabmi lahayd cabbirka gidaarka lebenka, tusaale ahaan, waxaad heli doontaa qiyaastii 30-40% horumarin xagga dhawaaqa difaaca ah. Sidoo kale saqafka, laakiin hadda waa inaan tixgelinno rarka dheeriga ah ee aan soo bandhigi doonno, saqafku ma taageeri karaa rarkan dheeriga ah iyo kharashka iyo dadaal intee le'eg?
Mise MARKAAN KA BAAHAN TAHAY Dhibaatooyinkaan Ka Soo Baxay FARSAMADA SHAQADA?
Ku darida saqafka saqafka ayaa loo arkaa inay wax ka qabato dhibaatada dhawaqa roobka KAHOR markii ay dhacday. Xal kale ayaa noqon doonta in laga hortago buuqa roobka inta aysan dhicin? Qalabka Silent Roof (SRM) wuxuu si sax ah u qabtaa maadaama lagu rakibay dusha sare ee saqafka dushiisa dusha sare ee saqafka sare ee jira ee dhex galaya roobka da'o. Intaa waxaa sii dheer, SRM ayaa culeyskeedu yahay 800gms halkii mitir oo laba jibaaran, dhisme kasta oo saqafka ah waa inuu awood u yeeshaa inuu gacan ka geysto isku darkaan ugu yar. Marka halkii lagu dari lahaa tiro, sidee buu wajiga Silent Roof usocdaa?
Qalabka Silent Roof (SRM) waa badeecad u gaar ah oo marka si fudud loo aamuso ay hoos u dhigeyso dhibicda roobka ee dusha sare saaran oo aan u wareejin saqafka saameynta saqafka dusha sare. Biyaha roobka ayaa markaa ku soo dhacaya saqafka SRM ka dibna si tartiib ah ugu daadanaya sagxadda saqafka asalka ah isla markaana ku sii socota nidaamka biyaha daadinta. Silent Roof wuxuu joojin doonaa inta badan buuqa roobka ee saqaf kasta oo saqafka ah ilaa sanqadha. Maaddadu waa midab madow oo waalli ahaan UV. Sababo la xiriira guryaha dabacsan ee dabacsan ayaa loo isticmaali karaa dusha sare oo dhan hadday fidsan tahay ama fidsan tahay. Waxaan soo saarnay habab kala duwan oo lagu ilaaliyo sheyga meelaha dusha kala duwan.
Qalabka Silent Roof-ka waa shay dabacsan, oo leh wajiyo badan, oo laga soo saaray xarkaha polyamide isku xidhka halka ay iskaga gudbaan si ay u sameeyaan jaakad adag, oo furan. Waxay leedahay halbeeg gadaal oo dhinac ah oo laga soo saaray dhumucyo aan caadi ahayn, qaab-laba geesood ah oo heerkul ahaan loogu xidhan yahay qaab-dhismeedka cabbirro badan.
Qaab dhismeedka Saqafka Saqafka Birta Sharaxa guud ahaan waxaa lagu daboolayaa dherer joogto ah oo ah sheyga aamusnaanta madow, dherer kasta waxaa lagu hubiyaa inay deris yihiin kuna xirnaadaan geeska. Sababtoo ah qaab dhismeedka furan ee furan ee maaddada ayaa soo bandhigaysa iska caabbinta dabaysha oo aad u yar sidaas darteedna aan waxyeello u geysanayn xaaladaha cimilada ee sii xumaanaya.
Adeegsiga - Hanti U Gaar ah
Silent Roof waa la dejin karaa. Dib-u-isticmaalkani waa hanti u gaar ah Qalabka Silent Roof Material (SRM). Markaad iibsaneyso qaddar kasta oo ah 'SRM', waxaad ku sameyneysaa aqoon ahaan in dib loogu guuri karo dhisme kale oo saqaf ah sida iyo goorta aad u baahatid. Arintan ayaan ahayn kiis ku dhawaad ​​dhammaan daaweyntii kale ee loo adeegsaday in la yareeyo saameynta dhawaqa roobka ee dhismaha guryaha.
Qaabka caadiga ah waa in la isku dayo in la yareeyo heerka wasakhda buuqa ka dib markii ay dhacday iyada oo lagu daro lakab buufiye ah hoos u dhigaya lakabka (yada) tusaale ahaan qaybta hoose ee dhismaha saqafka.
Qalabka Silent Roof Waxyaabaha lagu dabaqay dusha sare ee dhismaha saqafka, wuxuu joojiyaa dhibicda roobka ee saamaynaya dusha saqafka si aad u weyn hoos ugu dhigidda dhawaqa roobka ee ka hor intaysan dhicin.
Markaa markaa waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad duubtid SRM, u geyso meel kale oo aad uga faa'iideysato waana guryaha guryaha laga dhimayo dhawaqa roobka mar labaad, iyo markale, iyo markale… Hal iibsasho, codsiyo badan.
Waa maxay shey kale oo leh hantidan dib loo isticmaalay ee la xiriirta wasaqeynta buuqa roobka? Aqoonteenna, MAYA.
Sawirka dhanka midig ayaa ah halka laga soo raray Saqafka Bahalnimada ee Southall oo dib loogu dhejiyay Dhismihii hore ee Ignition ee Wembley, sawirka dhanka midig waa kan ka hor iyo ka dib markii saqafka aamusan uu ahaa. ku rakiban dhismihii hore ee Ignition.
Waxaas oo dhan waxaa la qabtay maalmihii 6 laga bilaabo bilow ilaa dhamaad.
Waxaan ku saleysanahay xeebta koonfureed ee England, si kastaba ha noqotee waxaa laga yaabaa inaad maanka ku hayso mashruuc meelo kale oo ka baxsan UK. Haddii aad leedahay xaalad ah sawaxanka roobka ee saqafka sare saamaynaya goobta shaqada ama aagga deggen ee ka hooseeya, Waxaan kuu diyaarin karnaa inaan u dhoofinno alaabteenna Silent Roof meesha aad joogto meel kasta oo ay adduunka ka ahaan karto.
Rakibaadda Qalabka Silent Roof waa mid sahlan lafteeda oo waxaa lagugu hagi doonaa tallaabo kasta oo jidka aad ku maro khadkayaga ama taakuleynta taleefankaaga haddii loo baahdo iyo goorta loo baahdo.
Qalabka Aamusan ee Silent (SRM) waxaa lagu bixiyaa baallooyinka 1 mitir oo ballac ah iyo ugu badnaan 60 mitir oo dherer ah. Mitir laba jibbaaran oo SRM ah waa 800g dhererkiisuna waa 17mm. Bales-yada waa la geyn karaa kahor-dherer kasta oo aad ugu baahan tahay mashruucaagu ha ahaado aag dusha sare leh, oo dhisan, foosto.
Nala soo xiriir hadda qiimaynta iyo gaarsiinta macluumaadka.
Kaliya dhowr ka mid ah shirkadaha aan leenahay ama aan hadda la shaqeyno
Waa maxay culeyska shayga SR
Waa maxay culeyska Qalabka Silent Roof? Miisaaniyadda Qalabka Silent Roof waa 800g halkii mitir oo keliya. Maaha wax la nuugo sidaa daraadeed uma sii hayn doonaan biyaha roobka inay ku darsadaan rarka saqafka sare ee la siiyay.
Maxay yihiin qiimaha 'U' & 'R'
Marka la eego qaddiyadaheena Silent Roof Qalabka, qiyamka 'U' iyo 'R' ee agabku waa wax aan muhiim ahayn marka la tixgelinayo inay tahay adeeg gaar ah oo si weyn hoos loogu dhigo dhawaaqa ay abuurtay roobka daadka ku dhaca ee dusha saqafka sare leh. Qalabka Silent Roof loogu talagalay ma aha inuu noqdo sheyga xaraashka kuleylka.
U-factor iyo U-qiimaha waa ereyo isweydaarsanaya oo tilmaamaya cabirka faa'iidada kuleylka ama luminta iyadoo la adeegsanayo shey sababtuna tahay farqiga u dhexeeya heerkulka hawada gudaha iyo dibedda ee walaxda. U-factor ama U-qiimaha ayaa sidoo kale loo yaqaanaa isku-darka guud ee wareejinta kuleylka. Qiime hoose oo U hooseeya ayaa tilmaamaya guryaha oo si fiican u liita. Cutubyadu waa Btu / (hr) (ft2) (° F). Qalabka Silent Roof looguma talagalin inuu noqdo xakameeye sidaa darteed qiimaha 'U' ee maadada lama xisaabin.
Xaashida Macluumaadka / Sheegashada Xirmooyinka
Halkan guji si aad u hesho nuqul pdf ah
Muddo intee le'eg ayay qaadataa in la rakibo
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in lagu rakibo Silent Roof. Markii lagu rakibay dhismayaasha 'Profile Metal Roofing' (PMR) iyo wixii la mid ah, Qalabka Silent Roofing (SRM) waxaa si fudud loogu soo rogayaa saqafka dushiisa ilaa sagxadda ilaa kor u qaadidda iyo korka saqafka. Mid kasta oo 'xariijimo' ah ayaa ballaciisu noqon doonaa 1m. Qeybta xigta waxaa la dhigaa foorari oo loo dhigaa qeybta hore oo 'waa la tolay' iyadoo la adeegsanayo fiilooyinka fiilooyinka ee loo yaqaan 'PVC cable'. Fiiqa ayaa markaa la rogayaa si loogu jiifto deriska deriskiisa hawshana lagu celiyo. Isticmaalidda habkan aag saqaf ah oo aad u badan ayaa lagu dabooli karaa SRM muddo gaaban oo caadi ahaan ah 60 mitir laba jibbaaran saacaddii oo ay la socdaan koox ka kooban laba fiitir ayaa caadi ah.
Silent Roof Waqtiga keenida
Waqtiga gudbinta aamusnaanta ee ka socota warshadda wax soo saarka illaa saldhigayaga Boqortooyada Midowday wuxuu qaadan doonaa inta u dhaxaysa toddobaadyada 3 iyo 6 ka dib marka la helo amarkaaga la xaqiijiyay iyada oo ku xidhan culayska shaqada ee hadda jira
Nolol la filaayay oo ah Dhagax aamusan
Waxaan haynaa xarumood oo hadda toban jirsaday oo aan lahayn wax calaamado ah oo xaalufinta. Si looga caawiyo nadiifinta muddada dheer dhererka waxaa lagu talinayaa in laga saaro qashinka burburka maaddada maaddada.
Waxaad soo dejin kartaa Warbixinta Saqafka Aamusan ee Acoustic halkan